कालिजको नियतिमा कांग्रेस - BP Bichar
Home/breaking/कालिजको नियतिमा कांग्रेस
BP BicharDecember 13, 2018
काठमाडौँ — गाउँमा छँदा सिकारीहरूले कालिजबारे भनेको सुनेको थिएँ, ‘कालिज चराले बेजोडको तीन वेग हान्छ । तेस्रो वेगपछि ऊ फतक्कै गल्छ र पखेटा फट्फटाउँदै लुकेर प्राण बचाउने प्रयास गर्छ । त्यसपछि कस्तो वेग हान्छ त्यसैले उसको भावी जीवन आंकलन गर्छ ।’ कांग्रेस अहिले यस्तै नियति व्यहोर्दै छ । कांग्रेस सत्तामा छैन । प्रतिपक्षमा हुँदा पनि कहाँ छ ? अत्तोपत्तो छैन ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धेरै गल्ती गरे पनि कांग्रेसको प्राण बचाएर मरे । ०६३ सालको जनआन्दोलन हाँके । नारायणहिटीबाट राजा ज्ञानेन्द्रलाई बिदाइ गरे । त्यो क्षण उनले राजतन्त्र र धर्मराज्यलाई काँध थापेको भए ज्ञानेन्द्रसँगै कांग्रेस इतिहास बनिसक्थ्यो । ज्ञानेन्द्र रानीवन पसे । राजतन्त्र र धर्मराज्यको वकालत गर्ने कांग्रेस बुद्धनगरतिरको हिन्दुवादी कांग्रेस कार्यालयमा सीमित हुन्थ्यो । १० वर्षअघिसम्म कांग्रेसले काँध थापेको राजतन्त्र आज छैन, कांग्रेस छ । वेग छैन । वेग क्षिण भएको कालिजजस्तै ।
कांग्रेसको तीन वेग
कांग्रेसले बेजोडको तीन वेग हानिसकेको छ । एकै पुस्ताका तीन फरक नेताले कांग्रेसलाई तीन पटक वेगवान् बनाए । ०७ सालको कांग्रेसको पहिलो वेग बेजोडकै थियो । हुकुमी शासनविरुद्ध नेपाली क्रान्तिको ‘लङ रेन्ज’ को मार थियो । क्याप्टेन थिए–बीपी कोइराला ।
‘गिरिजाप्रसादले कम्युनिष्टसित मिलेर राजतन्त्र फाले’ भन्ने कांग्रेसहरूले हेक्का राख्नुपर्ने के हो भने कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहले २०४६ सालमै कांग्रेसलाई वाममाेर्चासित मिलेर गणतन्त्रमा प्रविष्ट गराइसकेका थिए । भट्टराई पार्टी सभापति र सिंहजनआन्दोलनका नायक थिए । सिंहको नेतृत्वमा लोकतन्त्र, समानता र खुला समाजका लागि कांग्रेसले दोस्रो वेग हान्यो ।
दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले संवैधानिक मर्यादा उल्लंघन गरी शासन गर्न थाले । बूढा गिरिजाले त्यसो नगर्न भन्दा उल्टै थुन्ने तानाबाना गरेको चाल पाएपछि सशस्त्र विद्रोह गरिरहेका माओवादीसित मिलेर आन्दोलन चर्काए । जनआन्दोलन दुईको अगुवाइ गरे । २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभा पहिलो बैठकको रोष्ट्रमबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरे । यो कांग्रेसको तेस्रो वेग थियो । अहिले कांग्रेसको वेग बसेको छ ।
सामूहिक नेतृत्व !
कांग्रेस महासमतिको मुखैमा छ । विधान संशोधनको सरगर्मी चढेको छ । एकथरी कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व आवश्यक ठान्छन् । वामपन्थी पार्टीजस्तो ‘मिलिटेन्ट पार्टी’ बनाउन चाहन्छन् । अर्काथरी शक्तिशाली सभापति आवश्यक देख्छन् । विगतमा जस्तै सभापतिको निर्णायक भूमिकाको वकालत गर्छन् । रस्साकस्सी छ । हुनुपर्ने के हो त ?
कांग्रेस बीपी कोइरालाको अपीलबाट जन्मेको पार्टी हो । बीपीको अपील नै कांग्रेसको भ्रूण थियो । अँध्यारो कोठामा एक्लै जन्मेको थिएन त्यो भ्रूण । सार्वजनिक अपीलसहित धेरैबीच जन्मेको थियो । कांग्रेस भन्नु नै ‘मास’ हो । दृष्टिकोणसहितको नेतृत्वले हाँक्ने मध्यमार्गी धार हो ।
गुट, उपगुट र भित्रियाहरूको झुन्ड होइन । तन्नमदेखि अमिरसम्मको भावना हो कांग्रेस । त्यसलाई मुखरित गर्ने मध्यम हो नेतृत्व । कांग्रेस नेतृत्व संख्याको जोडघटाउभन्दा पनि आमनागरिकको चाहनाको चेहरा हो । १९४६ अक्टोबर २ मा बीपीले पटनाबाट प्रकाशित हुने सर्च लाइटमा पार्टी गठनको आवश्यकताबारे अपील गरेपछि नवजवानहरू भेटघाट र छलफलमा जुटेका थिए ।
कांग्रेसको परम्परा र शैलीले ‘मास बेस’ नेताकै खोजी गर्छ । सभापतिलाई लोकतन्त्रको मियो ठान्छ । सामूहिक नेतृत्वको कांग्रेस पार्टी परम्पराले चिन्दैन । ‘मिलिटेन्ट पार्टी’ बनाउने कि ‘मास बेस’?
त्यसैअनुसारको पार्टी संरचना निर्माणबारे बहस भइरहेछ । ‘मिलिटेन्ट’ बन्दा कांग्रेस खुम्चन्छ । जुन अहिले भइरहेछ । ‘मास बेस’ पार्टीलाई ‘मास बेस’ नेता नै चाहिन्छ ।
पार्टी सभापतिमा धेरै अधिकार दिँदा तानाशाही हुनसक्ने चिन्ता सामूहिक नेतृत्व पक्षधर कांग्रेसको बुझाइ छ । लोकतान्त्रिक पार्टीका सभापति तानाशाही हुन खोजे आफैं सिद्धिन्छन् ।
सभापतिको भूमिका कमजोर बनाएर सामूहिक नेतृत्वमा जानु कांग्रेसको पहिचान मेटाउनु हो । सामूहिक नेतृत्व थप कलह र झगडाको बीउ हो । सामूहिक नेतृत्वमा गएको भोलिपल्ट पार्टीमा वैधानिक बहुध्रुव जन्मिन्छ । अहिलेभन्दा दोब्बर, तेब्बर गुट पैदा हुन्छन् । गुटका सबै नेता सभापतिझैं प्रस्तुत हुन थाल्छन् ।
धेरै वर्ष सत्ता र पार्टी राजनीति गरेर थाकेका, पाकेका र जनताको नजरबाट टाढिँदै गएकाहरूको प्रयास हो– सामूहिक नेतृत्वको माग । जो ‘मास’ मा कमजोर छन् तिनको फेरि नेता बन्ने चालबाजीको चौतारी बन्छ सामूहिक नेतृत्व प्रणाली ।
को बूढो, को तन्नेरी ?
कांग्रेसमा क्रान्तिकारी पुस्ता सकिएको छ । पछुवा पुस्ता सत्तामा पुग्ने होडबाजीमा छ । बूढो कि तन्नेरी ? रोगी कि निरोगी ? धाराप्रवाह बोल्न सक्ने कि नसक्ने ? कस्तो नेतृत्व चाहिन्छ ? छान्ने जिम्मा सीमित कार्यकर्तालाई होइन लाखौं समर्थक, शुभेच्छुकलाई दिनुपर्छ । जसले ‘मास’ लाई नेतृत्व दिन सक्छ उही नेता बन्छ ।
अन्य सर्त र सम्झौता बकबास हुन् । नेतृत्वका लागि उमेर हद तोक्ने होइन लोकप्रियताका आधारमा निर्वाचित हुने पद्धति आवश्यक छ । कोही सदस्य सक्रिय छ र ‘मास’ ले नेता मान्छ भने उसलाई उमेर पुग्यो भनी पार्टी जीवनबाट बिदाइ गर्नेहरूले आफूलाई कसरी लोकतन्त्रवादी भन्ने ?
कांग्रेसले पटक–पटक महानिर्वाचन जित्छ । सरकार बनाउँछ । पार्टी र सरकारबीच झगडा भई सरकार पतन हुन्छ । २०५१ र ०५६ सालमा यही नियति बेहोर्नुपर्‍यो । पार्टी प्रमुख जो हुन्छ उसैले निर्वाचन हाँक्ने र जिते सरकार चलाउने, हारे पार्टी प्रमुखबाट राजीनामा गरेर अरूलाई मार्गप्रशस्त गर्नु वेश हुन्छ । यस्तो विधिले सरकार–पार्टीबीच किचलो र पार्टीमा उमेर र नेतृत्वको झगडालाई समाप्त गरिदिन्छ । पार्टी पेवा बन्दैन, सबैको बन्छ । होइन भने निकट भविष्यमा कांग्रेस ‘परिवार दल’ मा खुम्चने अर्को खतरा छ ।
वडादेखि केन्द्रसम्म नेताका सन्तति । जताततै पारिवारिक नेतृत्व स्थापित हुँदैछ । केही दशकमा कांग्रेसमा नेताका सन्तानबाहेक अन्यलाई आरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिलेझैं नेता/कार्यकर्ताले पार्टी पदाधिकारी चुन्ने हो भने कांग्रेस ‘परिवार दल’ कै रूपमा सीमित हुनेछ ।
‘मास पार्टी’ हुने छैन । ‘मास’ चरित्र बचाउन र ‘परिवार दल’ को चंगुलबाट फुत्काउन कांग्रेसले पार्टी निर्वाचन पद्धति बदल्नु उपयुक्त हुन्छ । हरेक वर्ष निश्चित समय तोकेर सबै नेपालीलाई कांग्रेसको सक्रिय सदस्य बन्न अपील गर्न सक्छ । जसरी बीपी कोइरालाले कांग्रेस जन्माउन मास अपील गरेका थिए ।
के पार्टी नेताका सन्ततिले राजनीति नै गर्न नपाउने त ? त्यस्तो पनि हुनु हुँदैन । तिनको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन हुनुहुन्न । कांग्रेसले कसैलाई पनि राजनीति गर्नबाट रोक्नु अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्नु हुन्छ । मासले रुचाए नेताकै सन्तान पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्छन् ।
त्यस्तो नेतृत्वलाई परिवारवादमा सीमित गर्नु पर्दैन । कसैकसैले भन्छन्– पार्टी भनेकै विचार मिल्नेहरूको परिवार हो । त्यो बृहत् रूपमा हो । नेताकै सन्ततिले पार्टी नेतृत्व घेराबन्दी गर्ने अहिलेको जस्तो अवस्थाका लागि होइन ।
मासरूपमा सदस्यता बाँडेर नेतृत्व चयन गर्न हुन्न भन्नेहरू तर्क गर्छन्– यसले पार्टीमा भद्रगोल र भाँडभैलो सिर्जना गर्छ । पार्टीका त्यागीहरू पाखा लाग्छन् । पार्टी ठेकेदारहरूले कब्जा गर्छन् । के अहिले कांग्रेस ठेकेदारहरूको कब्जामा छैन ? के अहिले बलदेव शर्मा मजगैंयाँहरूजस्ता पार्टीमा टिक्न सकेका छन् र ? गणेश प्रवृत्तिका कार्यकर्ताले भन्दा ‘मास’ ले विवेक पुर्‍याउनेछन् ।
कांग्रेसले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सिको गर्न सुहाउँदैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नक्कल गर्दै सामूहिक नेतृत्व र कार्यकर्ताले चल्ने (क्याडर बेस) पार्टी पद्धति अपनाउनु पनि हितकर छैन । ‘मास’ मै फर्केर गुमेको छवि फर्काउन सक्छ ।
केही मूलभूत विषयमा कांग्रेस स्पष्ट हुनु जरुरी छ ? धर्म, समाजवाद, वर्ग अर्थात् समाजबारे स्पष्ट भएर मासमा जाँदा कांग्रेसको आकर्षण बढ्छ ।
१. धर्म : धर्मराज्यको चक्करमा फस्नु हुन्न । महामन्त्री शशांक कोइराला हिन्दुराज्य स्थापनाको अभियानमा छन् । उनको यो अभियानले कांग्रेसलाई कमजोर बनाउँछ ।
२. समाजवाद : संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य उल्लेख गर्न कांग्रेस कसरी सहमत भयो ? कस्तो हो उसको समाजवाद ? अहिलेजस्तै बाह्य मुलुकसित मागेर जसले सक्छ उसले उपभोग गर्ने समाजवाद कि ? उत्पादनसहित समतामूलक वितरण प्रणालीमा आधारित समाजवाद ?
निमेषभरमा विश्व गतिविधि चियाउने पुस्तालाई आवश्यक समाजवादबारे कांग्रेसको दृष्टिकोण के ? सूचना प्रविधि र जैविक प्रविधिको विकाससित कसरी जोडिन्छ कांग्रेसको समाजवाद ? समाजवादलाई न त आदर्शवादको खोल ओढाएर ढाक्न सकिन्छ न राष्ट्रवादको परिधिमा सीमित गर्न । यो व्यापक र अन्तरनिर्भर छ ।
३. संघीयता : अहिले कांग्रेसमा वर्गचेत हराएको छ । समुदायको आवाज मधुरो छ । राष्ट्रवाद मौन छ । मधेस मुद्दामा अल्मलिएको छ । कांग्रेस र मधेसको मिलनविन्दु मध्यमार्ग हुनसक्छ । मासबाट अनुमोदित नेतृत्वले कांग्रेसलाई मात्र होइन मुलुकलाई नै जोड्न सक्छ।
कान्तिपुर दैनिकबाट साभार
आतंकवादीलाई सत्ता सुम्पेपछि देश वरवाद नभए के हुन्छ ः काँगे्रस नेता विनयध्वज चन्द
राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा विवादित अध्यादेश खारेज
मुलुक राजनीतिक दुर्घटनाको सँघारमा
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो निबन्ध जस्तै भएको काँगे्रस नेता सिंहको दाबी
केशवप्रसाद ढकालको निधनप्रति वीपी विचार राष्ट्रिय समाजद्धारा दुःख ब्यक्त